यो वर्षको क्यान इन्फोटेक मेला फरक र तीव्र प्रभावी बनाइने छ : नवराज कुँवर, अध्यक्ष, (क्यान महासंघ) « हाम्रो ईकोनोमी
नेपालमा मेला र महोत्सवहरूको शुरूवात गर्ने सम्भववतः पहिलो संस्था कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आगामी वैशाख ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म सूचना प्रविधि मेला (क्यान इन्फोटेक) आयोजना गर्दै छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा आयोजना गरिने इन्फोटेक लाखौँ मानिसले अवलोकन गर्ने महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवर बताउँछन् । विगतमा गरिँदै आएकोे ‘गेट टिकटिङ’को व्यवस्था हटाएर यो वर्ष प्रविधिको प्रयोगबाट टिकट खरीदको व्यवस्था गरिएको छ, जुन टिकट निःशुल्कजस्तै छ । त्यस कारण पनि यो मेलामा लाखौँ मानिसको सहभागिता रहने उनको दाबी छ ।
क्यान महासंघ सूचना प्रविधि मेला (क्यान इन्फोटेक) आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
मुख्यतः पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिहरूको प्रदर्शन गर्ने र आम मानिसहरूलाई जानकारी दिने थलोका रूपमा क्यान इन्फोटेकलाई लिइँदै आएको छ । पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हामीले यो मेलालाई दुई पटक स्थगित गरेका थियौँ । अहिले हामीले आगामी वैशाख ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म आयोजना गर्नेगरी तयारीलाई तीव्र पारेका छौँ । यो क्यान इन्फोटेक २०२२ को तयारी हामीले करीब अन्तिम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । प्रतिशतमा भन्ने हो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी तयारी हामीले गरिसकेका छौं ।
दुई–दुई पटक रोकिएर आयोजना हुन लागेको इन्फोटेक मेला विगतको भन्दा फरक हुन्छ कि पुरानैको निरन्तरता हो ?
स्वाभाविक रूपमा हामीले बुझेको विषय के हो भने सूचना प्रविधि के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यसको महत्व के–कति छ भनेर कोभिड–१९ र यसले निम्त्याएको विभिन्न परिस्थितिहरूले हामीमध्ये धेरैलाई राम्रोसँग सिकाएको छ । कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्र तहसनहस पारेको समयमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्र बढेर गएको छ भन्ने पनि गरिएको छ । किनभने मान्छेको पहुँच सूचना प्रविधिसँग हुँदै थियो भने लकडाउनको बेला घरमा बस्दा समय बिताउन गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसकारणले पनि पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकास कसरी भएको छ भन्ने कुरा जान्नका लागि धेरै मानिसहरू उत्सुक हुनुहन्छ ।
र, इन्फोटेक कहिले हुन्छ, कहाँ र कसरी हुन्छजस्ता जिज्ञासाका इन्क्वाइरीहरू पनि हामीकहाँ आइरहेका हुन्छन् । सँगसँगै हाम्रो व्यापारी साथीहरूले नेपालमा भित्र्याएका नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूबारे एउटै थलोबाट डिमोस्ट्रेशन गर्ने जुन उत्सुकता देखाउनुभएको छ त्यसले गर्दा विगतको तुलनामा यो मेला फरक र थप प्रभावकारी हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौं ।
आसन्न इन्फोटेक मेलामा जाने अवलोकनकर्ताहरूले नयाँ सूचना र जानकारी के–के पाउँदैछन् त ?
यो प्रविधि हो, स्वाभाविक रूपले दिनप्रतिदिन अपडेटेड भइरहेको हुन्छ । हामीले जसरी मोबाइल चलाउँछौं अधिकांश मोबाइलको फिचरहरू परिवर्तन भएर आइरहेका हुन्छन् । आखिरमा नाम एउटै हुन्छ, तर त्यसमा समावेश फिचर वा विशेषता थपिदै गएको हुन्छ । त्यस कारण हामीले प्रयोग गरिरहेको सूचना प्रविधिका सामग्री र सफ्टवेरहरू परिस्कृत भएर आउने छन् । सँगै कतिपय प्रडक्टहरूका मोडलहरू पनि फरक भएर आउँछन् । मुख्यतः हामीले गरिरहेको कामलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट थप सहज र सरल तरिकाबाट कसरी गर्न/गराउन सकिन्छ भन्ने विषयको जानकारी यो इन्फोटेकमा लिन, हेर्न र देख्न पाइने छ ।